India chọrọ ka UK wepu iche iche maka ndị India gbara ọgwụ mgbochi ọrịa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » India chọrọ ka UK wepu iche iche maka ndị India gbara ọgwụ mgbochi ọrịa
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa
Iwu a, nke na-enye iwu ka ewepụta ụbọchị iri maka ndị njem si India na-abịa, na-emetụtakwa ọtụtụ mba ndị ọzọ na-eji Covishield, gụnyere ọtụtụ ndị Africa.
Ndị ọbịa sitere na ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke si India ka chọrọ ịga kwarantaini ụbọchị iri maka COVID-10.
Mahadum Oxford na AstraZeneca mebere ọgwụ mgbochi Covishield yana Serum Institute of India mepụtara ya.
Achọghị ka ndị Britain jiri otu jabs ndị India mere ọgwụ mgbochi UK.
United Kingdom ekwuputala na ọ ga-eme ka mgbochi ọrịa COVID-19 kwụsịlata maka ndị ọbịa si mba ofesi gbaa ọgwụ mgbochi ọrịa malite n'isi ọnwa na-abịa.
Mana ndepụta mba nwere ọgwụ mgbochi akwadoro agunyeghị India, n'agbanyeghị mba ahụ na -eji ụdị ọgwụ mgbochi AstraZeneca mepụtara na UK, ọ na -ebutekwa ụfọdụ nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na iyi egwu nke mmegwara.
Ọgwụ Covishield, nke Mahadum Oxford mepụtara na AstraZeneca nke Pune dabeere Serum Institute of India rụpụtara, United Kingdom amataghị ya n'okpuru iwu ọhụrụ n'agbanyeghị na ọ bụ otu ihe ahụ ka ọ dị n'usoro ọgwụ enyere ọtụtụ nde ndị Britain.
The AstraZeneca ọgwụ mgbochi ọrịa na -emejupụta ọtụtụ ọgwụ ndị enyere ndị India ruo taa. Ọnụ ọgụgụ pere mpe ewerela ọgwụ mgbochi obodo nke Bharat Biotech mepụtara, nke anaghị arụ ọrụ na UK.
Onye ozi ala ọzọ nke India agbaala ndị ọchịchị gọọmentị Britain ume maka 'mkpebi mbụ nke mbipụ iche' na ndị India na -eleta United KingdomA ka na -achọkwa ịpụ iche ọbụlagodi ma a gbaa ha ọgwụ mgbochi.
Iwu mbata ọhụrụ, nke ga -amalite na Ọktoba, akpasuola ọtụtụ ndị India iwe, ndị were mkpebi ahụ dị ka ịkpa ókè. Achọghị ka ndị Britain jiri otu jabs ndị India mere ọgwụ mgbochi UK.
"Mkpebi ngwa ngwa nke mbipụta iche maka ọdịmma onwe onye," Minista mba ofesi Subrahmanyam Jaishankar kwuru na tweet taa mgbe ya na onye nnọchi anya Britain Liz Truss nwere nzukọ na New York, ebe ha abụọ na -aga nnọkọ ọgbakọ United Nations.
Ntugharị Britain nwekwara ike ibute mmegwara site na New Delhi, ebe onye ọrụ gọọmentị India kwuru na ọ nwere ike ịme ihe mmegwara ma ọ bụrụ na edozighị nsogbu ahụ ngwa ngwa.
"Isi okwu bụ na, nke a bụ ọgwụ mgbochi - Covishield - nke bụ ngwaahịa nwere ikikere nke ụlọ ọrụ UK arụpụtara na India nke anyị butere UK nde ọgwụ ise na arịrịọ gọọmentị," onye odeakwụkwọ mba ofesi India Harsh Vardhan Shringla. gwara ndị nta akụkọ na New Delhi.
Na-akpọ nnabata Covishield "amụma ịkpa oke", o kwuru na ya na UK na-enwe mkparịta ụka maka ihe ọhụrụ a chọrọ.
"Mana ọ bụrụ na anyị enwetaghị afọ ojuju anyị ga -abụ ikike anyị ịmanye mmeghachi omume."
Kọmịshọna elu nke Britain na New Delhi kwuru na UK na India na -arụkọ ọrụ iji dozie okwu a.